7 “Ko munhuwo zvake haana basa rokumanikidzirwa+ panyika here,Uye mazuva ake haana kufanana nemazuva omunhu wemaricho here?+ 2 Anosuwa mumvuri+ sezvinoita muranda,Uye anomirira mubayiro wake sezvinoita munhu wemaricho.+ 3 Nokudaro ndakaitwa kuti ndive nemwedzi isina zvainobatsira,+Uye vakandiverengera usiku hwokutambudzika.+ 4 Pandinenge ndarara ndinotiwo, ‘Ndichamuka rini?’+Pahunenge hwanyatsova usiku, ndinenge ndaneta nokushanduka-shanduka kusvikira mambakwedza. 5 Nyama yangu yafukidzwa nehonye+ nemavhinga evhu;+Ganda rangu raomarara uye riri kubuda urwa.+ 6 Mazuva angu anomhanya+ kupfuura zvinoita chirukiso chomuruki,Uye anoguma pasina tariro.+ 7 Yeukai kuti upenyu hwangu imhepo;+Kuti ziso rangu harizoonizve zvakanaka. 8 Ziso raiye anondiona harizondioni;Maziso enyu achanditarira, asi ndinenge ndisisipo.+ 9 Gore rinoguma, roenda;Saizvozvo iye anoburukira muSheori haazobudizve.+ 10 Haazodzokizve kumba kwake,Uye nzvimbo yake haizomuzivizve.+ 11 Naizvozvo, ini handizoregi kutaura nomuromo wangu.Ndichataura ndichitambudzika;Ndichava nehanya nokurwadziwa kwomweya wangu!+ 12 Ndiri gungwa kana kuti zimhuka romugungwa here,Zvamuri kundiisira murindi+ kuti andirinde? 13 Pandakati, ‘Mubhedha wangu uchandinyaradza,Mubhedha wangu uchabatsira kutakura kunetseka kwangu,’ 14 Makandityisa nezvandinorota,Uye munoita kuti nditange kutya nezvandinoratidzwa, 15 Zvokuti mweya wangu unosarudza kutadza kufema,Uye rufu+ pane kungova mapfupa chete. 16 Ndahuramba;+ handingadi kurarama nokusingagumi.Ndisiyei, nokuti mazuva angu imhepo inofemwa.+ 17 Munhuwo zvake chii+ kuti mumurere,Uye kuti muve nehanya naye, 18 Kuti mumuteerere mangwanani oga oga,Kuti mumuedze+ nguva dzose? 19 Nei musingazoregi kunditarira,+Kana kundirega ndiri ndoga kusvikira ndamedza mate angu? 20 Kana ndakatadza, chii chandingakuitai, imi Mucherechedzi wevanhu?+Nei mangoti nangananga neni, zvokuti ndava mutoro kwamuri? 21 Nei musingaregereri kudarika kwangu+Mofuratira kukanganisa kwangu?Nokuti zvino ndicharara muguruva;+Muchanditsvaka, asi ndinenge ndisisipo.”